Repoblika… demokratika | NewsMada
Tsy ilaozan’izay mamalan-kira amin’ny politika. Tsy izy, tsy mahavoa… ? Na manao fanahy iniana. Tsy sahy, tsy matoky tena… Ambentin-dresaka tamin’ity herinandro ity ny hoe Repoblika. Tsy ifandovana ny fitondram-panjakana, amin’ny alalan’ny fifidianana andraisan’ny olom-pirenena anjara ny fanomezam-pahefana izay mitondra. Nefa misy minia mamalan-kira, mitompo teny fantatra ho hany manana ny marina sy mety ary mahasoa ny maro.
Tsy mety handray anjara amin’ny fifidianana: ahoana, hanao inona… ? Tsy hita izay ilazana sy itsarana azy amin’izay lazainy sy ataony. Ny fifidianana no ahazoana mametraka azy amin’ny toerana sahaza sy mety aminy amin’izay tanjany sy izay vitany. Ny toy izany no mandringa na mamalan-kira ka izay mandray andraikitra indray no tsaraina hoe tsy ho marin-toerana na mandeha ila.
Voaresaka tato ho ato koa ny hoe demokrasia. “Fitondran’ny vahoaka, avy amin’ny vahoaka, ho an’ny vahoaka”, hoy ny filohan’i Etazonia teo aloha izay, i Abraham Lincoln. Avy amin’ny vahoaka izany, izy no mampandeha azy ary ho an’ny tombontsoany. Mila mitondra izay mahasoa ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka ny hoe fahalalahana maneho hevitra? Fa tsy fanehoan-kery ho tsy resy tohika, manana ny marina…
Mifandrohy amin’izay demokrasia izay amin’ny tany repoblikanina ny fanjakana tan-dalàna, ny fisaraham-pahefana, ny fifidianana fakana fahefana, ny fahalalahana maneho hevitra, ny fitsinjaram-pahefana… Tsy mandeha ila fa mifameno hisian’ny fahamarinan-toerana ireo. Misy ny fahefana mpanatanteraka, ny mpanao lalàna, ny mpitsara. Tsy efa samy nandray ny andraikitra tandrify azy ve ireo amin’izao fifidianana loholona izao?
Tsy lavina, malalaka ny fanehoan-kevitra. Tsara henoina ary manan-jo amin’izany izay miteny na hoe vitsy anisa aza. Saingy mitondra inona eo amin’ny raharaham-pirenena sy ny fiainam-bahoaka izay lazaina sy atao? Fitsikerana, fanakiviana, fanaratsiana… Tonga amin’ny fankalahana sy fanakorontanana aza ny sasany. Tsy mety avokoa izay mitranga sy atao rehetra?